Komishinii Mirga Namoomaa UN: ‘Yeroo Covid-19 hammaatetti intarneetiin Lixa Oromiyaatti cufame turuun isaa baay’ee nu yaachise’ – Kichuu
Dubbii Himaa Mirga Namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Ruppart Kolviil
(bbcafaanoromoo)—Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namoomaa, yeroo weerarri Covid-19 hammaatetti Lixa Oromiyaatti maloonni kominikeeshinii cufamanii turuun baay’ee na yaachise jedhe.
Ibsa dhaabatichi kaleessa baaseen akka mul’isetti, tibba addunyaan tatamsa’ina koronaavaayirasii ittisuuf carraaqaa jirtutti walitti fufinsaan Lixa Oromiyaatti bilbilaafi intarneetiin adda citun isaa baay’ee na yaachiseera jedheera.
Torban darbe haala walfakkaatuun raapportarri addaa garee mirga namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii yeroo weerarri koronaavaayirasii hammaatetti intarneetii cufuun fudhatama hin qabu jedhee ture.
‘Wayita ammaa yeroo biyyoonni hundi lammiileen isaanii marti kan kana dura turerraa caalaatti tajaajila intarneetiifi bilbilaa akka argatan taasisaniif gaafannutti, gartokkee Itoophiyaatti ammoo walitti fufinsaan maloonni kominikeeshinii cufameera. Kun immoo keessattuu haala koronaavaayirasii keessattis baay’ee yaadeessaadha,” jechuun yaaddoo qabu kan ibse.
Dhaabbanni biyya Siwizerlaand magaalaa Jeeneev bu’ureeffate kun akka jedheetti, Itoophiyaan baatii Amajii 7, 2020 irraa kaasee sababa ‘nageenyaa eeruun’ intarneetiifi quunnamtii uggurteetti.
Kanaanis godinaalee akka Qeellam Wallaggaa, Wallaga lixaafi Horro Guduruu Wallaggaa kanneen to’annoo waraanaa federaalaa jalatti argaman tajaajila bilbilaafi intarneetii dhorkamaniiru jedheera.
Dhaabbatichi dabaluunis, motumman Itoophiyaa bara darbee yeroo adda addaatti intarneetii cufaa kan ture yoo ta’u, kunis jiruufi mirga namoomaa lammiilee kanneen keessa jiraatanii miidhuusaa caqaseera.
Fakkeenyaaf dandeettii odeeffannoo argachuufi qooduu jiraattoota kanneenii akkasuma walitti dhufeenya firoota isaanii waliin qaban akka danqamu ta’eera jedheera ibsichi.
Kanaafuu motummaa Itoophiyaafi kanneen galmee walfakkaatu qaban ”atatamaan uggura intarneetii fi bilbilaa” akka kaasaniif waamicha taasiseera.
Keessattu ”yeroo dhukkubni Covid-19 tatamsa’etti namni kamiiyyuu daangaa tokko malee dhukkubicha irratti odeeffannoo akka qabaatuuf” dhaabbatichi gaafateera.
Itti dabaluunis, qondaaltonni, oggeessonni fayyaa, oggeessonni biraa dhimmichi ilaallatu dhukkubicharratti hundi odeeffannoo sirrii fi barbaachisaa waliiniifi ummata waliin qoodu danda’u qabaatu, jedheera ibsi kun.
Intarneetiifi bilbilli cufame akka banamu kana dura gareen mirga namoomaa akka Humaan Raayitis Waach, akkasumas dhaabbileen siyaasaafi waldaan ogeeyyota garaa garaa gaafataniiru.
Haa ta’u malee, wanti haaraa qondaaltota Itoophiyaa irraa dhagahame hin jiru.
Itophiyaa keessatti hanga ammaa namoonni 16 koronaavaayirasiin qabamaniiru. Yeroo duraaf namni jalqabaa magaalaa Finfinneen ala magaalaa Adaamaatti qabamuu mootummaan ibseera.